Romelu Lukaku oo ceebeystay kooxdiisii hore ee Manchester United – Gool FM
Romelu Lukaku oo ceebeystay kooxdiisii hore ee Manchester United
(Milano) 04 Feb 2020. Weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku ayaa dhaliyay labo gool kulankii ay ku wada ciyaareen kooxdiisa Inter iyo Udinese horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga Isbuucan.
Romelu Lukaku ayaa sare u qaaday tirsigiisa gooldhalineed ee xilli ciyaareedkan 2019/2020, wuxuuna gaaray goolkiisii 16-aad.
Lukaku ayaa dhaliyay afar gool ilaa iyo haatan sanadkan cusub ee 2020, wuxuuna min labo gool ka kala dhaliyay kooxaha Napoli iyo Udinese.
Sidaas darteed Romelu Lukaku kaligiis ayaa wuxuu soo bar-bareeyay goolasha kooxdiisii ​​hore ee Manchester United ay ilaa iyo haatan ka dhalisay sanadkan cusub 2020 kulamada horyaalka Premier League.
Manchester ayaa wajahday Arsenal maalinka koowaad ee sanadkan cusub, iyadoo looga badiyay 2-0, ka hor inta aysan wajahin Norwich oo ay kaga guuleysteen 4-0, laakiin tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyay oo ay taariikhdu aheyd 11-ka Janaayo weerarka United-ka ayaa waxay awoodi waayeen inay shabaqa ka soo taabtaan koox kasta ay la ciyaareen.
Kaddib waxay la ciyaareen kooxda Liverpool waxayna kala kulmeen guuldarro 2-0 ah, isla natiijadaas oo kale ay kala kulmeen naadiga Burnley, iyadoo kulankii ugu dambeeyay ee Red Devils ka ciyaartay horyaalka Premier League ay ku wajahday Wolverhampton waxayna iska lumiyeen labo dhibcood dheeri ah, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 0-0 ah.
Guud ahaan weerarka kooxda Man United xilli ciyaareedkan wuxuu dhaliyay kaliya 36 gool 25 kulan ay ciyaareen, waxaana Red Devils ka wanaagsan dhamaan weerarka kooxaha Liverpool oo dhaliyay 60 gool, iyo Man City oo ay xiddigahooda dhanka weerarka dhaliyeen 65 gool.
Sidoo kale weerarka kooxda Leicester City ayaa waxay dhaliyeen 54 gool, halka Chelsea ay dhaliyeen 43 gool, iyadoo ay Tottenham Hotspur weerarkeedana dhaliyeen 40 gool.
Taariikhda iyo Saacadda la ciyaarayo kulanka lugta labaad ee El Clasico Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo la shaaciyey